အခြေခံအင်္ဂလိပ်အသုံး ၁၂ - Myanmar Network
Posted by zar ni (My Way!) on October 28, 2013 at 17:11 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
38. article နိဒါန်း
အင်္ဂလိပ်သဒ္ဒါတွင် article များကို မှန်ကန်စွာသုံးစွဲတတ်ရေးသည် အခက်ဆုံးကိစ္စများထဲတွင် တစ်ခုအပါအ၀င်ဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင် ကံအားလျော်စွာပင် article အမှားများသည် စာအရေးအသားတစ်ခုအား နားလည်မှုကို ထိခိုက်ရလောက်အောင် အရေးမပါလှပါ။ စာကြောင်းတစ်ကြောင်းအတွင်းမှ article များကို ချန်ထားခဲ့မည်ဆိုလျှင်ပင် အဓိပ္ပါယ်ကို နားလည်နိုင်သေးသည်။
ဥပမာ Please can you lend me pound of butter till end of week?
သို့ရာတွင် ရေးထုံးမှန်မှန်ကန်ကန်ဖြစ်ဖို့ကိုတော့အားထုတ်သင့်ပေသည်။ article အသုံးပြုပုံ ဥပဒေသများကို နားလည်နိုင်ရန်အတွက် ပထမဦးစွာ countable noun (ရေတွက်၍ရသော နာမ်) နှင့် uncountable noun (ရေတွက်၍မရသောနာမ်) တို့ကို သိထားရပါမည်။
39. articles: a/an (a/an အသုံး)
၁။ House, engineer, girl, name ကဲ့သို့သော နာမ်များသည် လူ/အရာဝတ္ထုအတန်းအစား တစ်ခုလုံးကိုရည်ညွှန်းသည်။
ထို လူ/အရာဝတ္ထုအတန်းအစားထဲမှ တစ်ဦးတစ်ယောက်ကိုရည်ညွှန်းလိုသည့်အခါ Noun တစ်ခုရှေ့တွင် a/an ထည့်သုံးသည်။(A/an means ‘one'.)
She lives inanice big house. သူ အိမ်ကြီးတစ်လုံးတွင်နေသည်။
My father is an engineer. (NOT My father is engineer. ) ကျွန်တော့်အဖေသည် အင်ဂျင်နီယာတစ်ယောက်ဖြစ်သည်။
၂။ လူတစ်ဦး၊ အရာဝတ္ထုတစ်ခုကို သတ်မှတ်၊ ဖော်ပြသည့်အခါ a/an သုံးသည်။(ဘာဖြစ်သည်၊ ဘာအမျိုးအစားဖြစ်သည်ဟုပြောသည့်အခါ)
He’sadoctor. သူသည်ဆရာဝန်တစ်ဦးဖြစ်သည်။
‘What's that?‘ ‘It’sacalculator. ' အဲဒါဘာလဲ။ ဒါ ဂဏန်းတွက်စက်တစ်ခုဖြစ်သည်။
၃။ a/an သည် “တစ်ခု”ဟုအဓိပ္ပါယ်ရသဖြင့် ၄င်းကိုအများကိန်း၊ ရေတွက်၍မရသောနာမ် များနှင့်မသုံးပါ။
My parents are doctors. (NOT . . .adoctors)
Would you like some salt?(NOT . . .asalt.)
Noun မပါသည့် adjective များသက်သက်ဖြင့် a/an ကိုမသုံးပါ။
She’savery good engineer. သူသည် အလွန်တော်သည့်အင်ဂျင်နီယာတစ်ဦးဖြစ်သည်။
She’s very good. (NOT . . . She’savery good.)
a/an အား အခြား determiner(ဥပမာ- my, you) တစ်ခုနှင့်တွဲမသုံးပါ။
He’safriend of mine. (NOT. . . He’samy friend.) သူသည် ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ဖြစ်သည်။
40. articles: the (တိကျသော article)
The သည် ပြောသူညွှန်းသည့်အရာကိုနားထောင်သူမှသိသည့်အခါ ‘you know which one l mean’. သုံးသည်။ ၄င်းအား ရေတွက်မရသောနာမ်၊ နာမ်အနည်းကိန်း၊ နာမ်အများကိန်း တို့နှင့်သုံးသည်။
the water (uncountable)
the table (singular countable)
the stars (plural countable)
the ကို အောက်ပါအခြေအနေမျိုးတွင်သုံးသည်။
She 's got two children:agirl andaboy. The boy’s fourteen and the girl's eight.
b. မည်သည့်လူ၊ အရာဝတ္ထုကိုဆိုလိုကြောင်းပြသည့်အခါ
Who’s the girl in the car over there with John? ဟိုကားထဲကဂျွန်နဲ့ရှိနေတဲ့ ကောင်မလေးက ဘယ်သူလဲ။
c. မည်သည့် လူ အရာဝတ္ထုကိုဆိုလိုကြောင်း ပြောနေသည့်အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီး နားလည်သည့်အခါ
Could you close the door? (တံခါးတစ်ပေါက်တည်းသာပွင့်နေသည်။)
‘Where’s Ann?‘ ‘In the kitchen.’ Could you pass the salt?
the အား အခြား determiner(ဥပမာ- my, you, this, some) တစ်ခုနှင့်တွဲမသုံးပါ။
This is my uncle. (NOT . . . the my uncle )
I like this beer. (NOT . . . the this beer)
The အားကိုယ်ပိုင်နာမ်များနှင့်တွဲမသုံးပါ။ (ချွင်းချက်အချို့ရှိပါသည်။)
Mary lives in Switzerland. (NOT . . . the Switzerland) မေရီ ဆွစ်ဇာလန်တွင်နေသည်။
အရာဝတ္ထုတို့အကြောင်းယေဘုယျပြောသည့်အခါ the ကိုမသုံးပါ။
Books are expensive. (NOT . . . The books are expensive.) စာအုပ်များသည် ဈေးကြီးသည်။
41. articles: the difference between a/an and the (a/an နှင့် the တို့ခြားနားပုံ)
a/an နှင့် the တို့ခြားနားပုံမှာအလွန်ရိုးရှင်းပါသည်။
a/an က အတန်းအစားတစ်ခုထဲမှတစ်ခု ‘one ofaclass‘ ကိုဆိုလိုသည်။
the က ပြောသူဆိုလိုသည်ကို ကြားသူကသိသည် ‘you know exactly which one’.
A doctor must like people. ( = မည်သည့်ဆရာဝန်မဆို၊ မည်သည့်တစ်ယောက်ယောက်)
My brother'sadoctor. ( = ဆရာဝန်များထဲမှတစ်ယောက်)
I ‘m going to see the doctor. ( မိမိ၏ဆရာဝန်၊ ဘယ်သူဆိုသည်ကို ကြားသူသိသည်။)
I live inasmall flat at the top of an old house near the town hall.
A small flat - အိမ်၏အပေါ်တွင် တိုက်ခန်း နှစ်ခန်းသုံးခန်းရှိနိုင်သည်။ ၄င်းတို့ထဲမှတစ်ခု
The top – ဘယ်အပေါ်ဆိုတာသိသည်။ ထိုလူနေသောအိမ်အပေါ်ထပ်ဖြစ်သည်။
The town hall - မြို့တွင်ရှိသော တစ်ခုတည်းသော မြို့တော်ခန်းမဆိုတာသိသည်။
Permalink Reply by Khine Zin Oo on October 29, 2013 at 14:44
Permalink Reply by may mon on October 31, 2013 at 21:30
Permalink Reply by ko thar lay on November 10, 2013 at 22:43
Permalink Reply by tun aye on November 11, 2013 at 13:50
Permalink Reply by tun aye on November 11, 2013 at 13:54
When is "the " used in abstract noun with changing condition? For example, the development of our project depends on our unity and hardworking.
Permalink Reply by Naw Shwe on November 20, 2013 at 16:36